Ngwanrọ njikwa nsogbu | Motadata
Ngwanrọ njikwa nsogbu
Welata mmetụta nke ihe omume IT
Nyefee nnweta ọrụ na njikwa nsogbu ITIL.
Were Proactive Approach ITIL njikwa nsogbu
Nlekọta nsogbu nke Motadata ServiceOps ITSM Platform nwere ike inyere gị aka ibelata ọgbaghara ugboro ugboro na-eme na akụrụngwa IT wee kwalite afọ ojuju ndị ahịa.
Wepụ nsogbu IT na-akpụ akpụ Analysis akpata
Nweta visibiliti ka ukwuu na nsogbu sistemu site na ịchọpụta na ịchọpụta ihe kpatara ihe na-eme ugboro ugboro.
Dekọọ mgbaàmà ma nyochaa mmetụta
Nye mgbagha ma ọ bụ ihe ngwọta nwa oge
Debe ndekọ njehie amaara
Enwetara ọrụ enwetara
Afọ ojuju onye emelitere
Jiri usoro mkpebi mee ngwa ngwa workflow akpaaka
Jikwaa nsogbu nke ọma site na iji usoro mmemme dabere n'ọkwa dị iche iche ma ọ bụ oge ọ bụla na-arụ ọrụ dị ala.
Gbanwee ọkwa na akpaghị aka na tiketi dabere na ọnọdụ akọwara mbụ
Na-akpalite mmechi nke ihe jikọrọ ya na akpaghị aka mgbe emechiri nsogbu ahụ
Megharịa ọkwa na nsogbu iji gbochie mbịgharị ihe omume
Nzaghachi ngwa ngwa
Jikọọ ngwa ngwa na ndị ọzọ Usoro ITSM
Gbaa mbọ hụ na enwere ọrụ dị elu site na ijikọ ọnụ na-eji njikwa nsogbu na usoro ITSM ndị ọzọ dị ka ihe omume, mgbanwe, ihe ọmụma na njikwa akụ.
Jikọọ ihe omume ndị yiri ya na nsogbu
Mee mgbanwe n'ịchọpụta ihe ngwọta na-adịgide adịgide maka nsogbu
Bipụta akụkọ ntọala ihe ọmụma maka ntụnye aka n'ọdịnihu
Mbara arụmọrụ arụmọrụ
Ọhụụ ka mma
Wepụ ihe ndị na-eme ugboro ugboro wee wedata ndasasị na arụ ọrụ azụmaahịa na-aga n'ihu na ngwanrọ njikwa nsogbu anyị.
Kaa akara ma jikọta nsogbu dị ka nke amaara ma hụ na ndị nnọchi anya nwere ọnọdụ zuru oke iji nye mkpebi ngwa ngwa.
Akụkọ & Dashboards
Mepụta akụkọ n'ụzọ dị mfe ma jiri anya nke uche hụ data site na bọọdụ dashboard iji chọpụta mmekọrịta na usoro nsogbu.
Belata tiketi mbata site na ime ka ndị ọrụ nwee ike ịchọta ihe mgbochi maka nsogbu nkịtị site na portal.
Nweta ozi niile dị mkpa metụtara ngwa ngwa mgbe ị na-enyocha nsogbu site na ijikọ akụrụngwa na tiketi nsogbu.
Mmelite buru ibu
Gbanwee nkọwa nke ọtụtụ nsogbu n'otu oge. Imelite ọtụtụ nsogbu bụ naanị otu ọpịpị pụọ!
Universal Smart Search
Chọọ nsogbu n'ime sekọnd iji omenala na ihe nzacha ndị eburu ụzọ kọwaa nke ogwe ọchụchọ dị elu.
Kedu ụfọdụ usoro njikwa nsogbu?
Enwere usoro ole na ole iji guzobe usoro njikwa nsogbu na-aga nke ọma. Nke mbụ, kọwapụta ma detuo oke usoro a wee kọwaa ọrụ na ibu ọrụ. Mgbe ahụ, chọpụta na kọwapụta nke ọma ihe mkpalite na-emeghachi omume na nke na-arụ ọrụ.
Jide n'aka na ị ghọtara ọdịiche na mmekọrịta dị n'etiti ihe omume na nsogbu ma guzobe usoro nlekọta ihe omume dị irè. Jiri usoro "5 Whys" mee ihe. Nye nchekwa data njehie amaara maka njikwa nsogbu nke ọma ma jiri njikwa nsogbu ejikọta ọnụ na usoro ITSM ndị ọzọ iji mepụta uru karịa.
N'ikpeazụ, hụ na ị nwere KPI akọwapụtara nke ọma yana usoro mkpesa njikwa doro anya.
Kedu ụdị njikwa nsogbu dị iche iche?
Enwere ụdị usoro njikwa nsogbu abụọ - njikwa nsogbu na-arụ ọrụ na mmeghachi omume.
Nlekọta nsogbu na-arụ ọrụ na-elekwasị anya n'ịchọpụta ihe ndị ga-eme n'ọdịnihu na igbochi ha ịmaliteghachi site na ịchọpụta na ikpochapụ ihe kpatara ya tupu ha enwee ike ịkpata ọgba aghara ọrụ.
Njikwa nsogbu mmeghachi omume na-elekwasị anya na ịzaghachi ihe omume ugboro ugboro site n'ịchọpụta ihe kpatara ya na ịkwado ngwọta dị ogologo oge. Ọ dị mkpa ịmata ihe ndị a na-eme ugboro ugboro dị ka nsogbu, na nke a.
Yabụ, a na-amalite njikwa nsogbu ngwa ngwa na ọrụ ọrụ mana a na-ewerekarị ya dị ka akụkụ nke nkwalite ọrụ na-aga n'ihu ma na-achọ ịchọpụta nsogbu na igbochi ihe omume ime ma ọlị, ebe a na-emejuputa njikwa nsogbu mmeghachi omume dịka akụkụ nke ọrụ ọrụ na ebumnuche ịgbaso. n'ihe ndị merela eme.
Kedu ọrụ onye njikwa nsogbu?
Usoro nlekọta nsogbu na-enyere aka n'ịchọpụta na ịghọta ihe kpatara ihe merenụ na ikpebi ụzọ kachasị mma iji kpochapụ ihe kpatara ya.
Onye njikwa nsogbu na-ahụ maka usoro nhazi n'ozuzu maka otu nsogbu. Ha na-ahazi ma na-eduzi akụkụ niile nke mbọ idozi nsogbu nke gụnyere ịchịkọta otu, ngwaọrụ na ozi kwesịrị ekwesị.
Ọrụ nke ndị na-ahụ maka nsogbu gụnyere ijikwa usoro ndụ nsogbu, igbochi ihe omume na-eme, ibelata mmetụta nke ihe omume, inye ngwọta nwa oge ma ọ bụ ihe mgbakwasị ụkwụ maka njikwa ihe omume, ịmepụta ngwọta doro anya maka okwu ndị a ma ama, yana ime nyocha ihe omume.
Kedu uru nlekọta nsogbu?
Ejiri ya n'ụzọ ziri ezi, njikwa nsogbu nwere ike inye nnukwu uru maka nzukọ gị. Ọ na-abawanye ọnụego mkpebi oge mbụ site n'inye ihe ngwọta na-adịgide adịgide maka ihe omume kama ịkwụsị naanị n'ebe ọrụ. Otu a usoro njikwa nsogbu na-ebelata mmetụta nke ihe omume na ọrụ na-aga n'ihu ma na-egbochi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile na-eme ugboro ugboro iji kwalite mmepụta onye ọrụ.
Njikwa nsogbu na-enyere aka imeziwanye nhazi ọrụ site na ịchọpụta ihe kpatara mgbọrọgwụ iji hụ na nnyefe ọrụ dị irè ma wusie ntụkwasị obi nke ndị ọrụ ike. Ọ na-enyere aka iwepụ njehie dị na ọrụ otu nzukọ site na akwụkwọ kwesịrị ekwesị ma na-ebelata oge ọ na-ewe iji gbakee site na ọdịda ndị a site na nhazi nhazi nke ntọala ihe ọmụma.